C/kariin Xuseen Guuleed oo daneynaaya in markale uu noqdo Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliya - iftineducation.com
iftineducation.com – Wasiirkii hore ee Arrimaha Gudaha iyo Amniga ee Somaliya C/kariin Xuseen Guuleed, ayaa waxa uu markale uu xusul-duub ugu jiraa, in uu ka mid noqdo Golaha Wasiirada ee Xukuumada cusub.
C/kariin Xuseen Guuleed, ayaa Xukuumadii Saacid soo noqday Wasiirkii Arrimaha Gudaha iyo Amniga, halka Xukuumadii C/weli Sheekh Axmed uu ka soo noqday Wasiirka Amniga Qaranka. Wuxuuna xilkaasi iska casilay 24-kii bishii May, ka dib weerarkii abaabulnaa ay Shabaabku ku galeen Xarunta Baarlamaanka Somaliya.
Guuleed oo si dhow loola xiriiriyo Madaxweynaha Dowladda Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa waxa uu u hanqal taagayaa in uu ka mid noqdo Golaha Wasiirada cusub.
Wasiirkii hore ee Arrimaha Gudaha, ayaa waxaa maalmahaan si weyn loogu arkaayay Qasriga Madaxtooyadda ee Villa Somalia. Waxayna wararku sheegayaa in damaciisu uu yahay in uu noqdo Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka.
Ilo wareedyo, ayaa waxay sheegayaan in Madaxweynaha Somaliya uu qorshahiisu yahay, in Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka uu u soo magacaabo Axme C/salaan Xaaji Aadan, oo hadda ah Safiirka Somaliya u fadhiya dalka Itoobiya.